यसकारण युवाहरु झन् बढी संक्रमित हुँदै « News24 : Premium News Channel
यसकारण युवाहरु झन् बढी संक्रमित हुँदै
प्रकाशित मिति : Aug 08, 2020
काठमाडौं, २४ साउन । युवामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ भनिन्छ। तर, यही उमेरसमूहका व्यक्ति कोरोनाबाट बढी संक्रमित छन्। २१ देखि ३० वर्ष उमेरसमूहमा संक्रमण ३९.९ प्रतिशत छ। दोस्रोमा ३१ देखि ४० वर्ष उमेरमा संक्रमण २३.५ प्रतिशत छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको ६ महिना अवधिमा उमेरका हिसाबले सबै समूहमा संक्रमित देखिएका छन्। चीनमा अध्ययन गरी फर्किएका युवामा गत माघ ९ गते पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसयता संक्रमितको संख्या २२ हजार २ सय १४ पुगेको छ। १५ हजार ८ सय १४ जना निको भएकोे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म ६ हजार ३ सय ३० जना आइसोलेसनमा छन्। ६६ जना आईसीयूमा छन्। यीमध्ये ३ जना भेन्टिलेटरमा छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार यीमध्ये बहुसंख्यक ७५ प्रतिशतभन्दा बढी २१ देखि ६० वर्ष उमेरसमूहका छन्। ६० भन्दा माथिको उमेरसमूहका संक्रमितको संख्या २.१ प्रतिशत छ। १० वर्षमुनिका बालबालिकाको संक्रमण ४ प्रतिशत छ।
११ देखि २० वर्ष उमेरमा संक्रमण १५.४ प्रतिशत छ। डा. तिवारीका अनुसार चलायमान समूहमा संक्रमण देखिनुले आगामी अवस्था गम्भीर रहेको संकेत गर्छ। यही समूहले घरमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई संक्रमण सार्ने जोखिम हुन्छ।
मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले घरमा बसिरहन नरुचाउने भएकाले युवा बढी संक्रमित हुन पुगेको बताए। क्वारेन्टाइनमा बसेका र बाहिर डुलिहिँड्ने युवामा संक्रमणको दर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ क्वारेन्टाइनमा बसेका युवामा संक्रमण देखिएको हो भने नियन्त्रण गर्न खासै गाह्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘बाहिर बजारमा डुलिहिँड्ने युवा समूहमा संक्रमण देखिएको हो भने समुदायमा फैलने जोखिम हुन्छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुन्छ।’
एकापसमा घुलमिल हुने कारण पनि युवामा बढी संक्रमण देखिएको विज्ञको भनाइ छ। यस्तै, असुरक्षित तवरमा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका कारण पनि संक्रमण फैलनमा सहयोग पुगेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा लापरवाही देखिएको डा. तिवारीको भनाइ छ। ‘मास्क नलगाएको र भौतिक दूरी कायम नगरेको पो हो कि ? जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको पो हो कि ? ’, उनले प्रश्न गरे। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षा सन् २०२१ मा मात्रै
बोझ बन्दै पिसिआर परीक्षण
स्थानीय तहमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति स् कतै अभाव कतै खातैखात
अतिक्रमणविरुद्ध आक्रामक बन्दै काठमाडौं महानगरपालिका
ओली र प्रचण्डका आ-आफ्नै दाउपेच
दसैं नजिकियोः व्यापारीले ठग्न थाले उपभोक्ता
तेजाबविरुद्ध कठोर कानून बनाएको सरकारमाथि बलात्कारविरुद्ध अझ कडा कानून बनाउन दबाब (भिडियो)
access_time 10:33 pm
प्रधानसेनापति थापाको पिसिआर परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ
access_time 10:25 pm
पाकिस्तानमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा चार जनाको मृत्यु, १२ घाइते
access_time 9:47 pm
रिया भण्डारी, काठमाडौं, १४ असोज । जतिसुकै आवाज उठेपनि गाउँठाउँमा सम्झनाहरु बलात्कारको शिकार बन्न छोडेनन्
काठमाडौं, १४ असोज । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको पिसिआर परीक्षणको नतिजा नगेटिभ आएको छ ।प्रधानसेनापति थापाको
एजेन्सी, १४ असोज । पाकिस्तानको उत्तरी प्रान्त खैबर पाक्थुन्क्वा प्रान्तको मार्दन नगरमा बुधबार अपरान्ह भएको